Fidinana ifotony… midi-droa | NewsMada
Par Taratra sur 08/11/2021
Mandeha ny fotoana, efa ho telo volana izao: mby aiza ny hoe fidinana ifotony? Tsy inona fa ny fijeren’ny tomponandraiki-panjakana ambony ny olana sy ny hetahetam-bahoaka, ny famahana sy ny famaliana izany. Eo ny vahoaka mahatsapa sy mitsara izay iainany: efa nisy tomponandraiki-panjakana ambony nijery ifotony ny olana ve? Na efa nisy famahana fahasahiranana sy famaliana faniriana…
Ny tsy azo lavina, misy ny karazana olana na fahasahiranana tsy voavaha raha tsy idinan’ny mpitondra ambony any ifotony: mihaino ny fitarainam-bahoaka, manadihady… Angady tsy mahatapaka ahitra ny tomponandraikitra eny an-toerana? Vao mainka izay faniriana… Misy aza ny manampahefana sasany isan-tsehatra na isan’ambaratonga indray no lasa olana: sakana amin’ny fampandrosoana. Nahoana?
Ao, ohatra, ireo tomponandraiki-panjakana eny ifotony te hanafina ny tsy fahombiazany sy ny tsy fahavitany ny asany araka ny tokony ho izy, ka tsy misy tatitra na fitarainana miakatra amin’izany. Dia tsy misy olana na fahasahiranana voavaha amin’izany, indrindra izay hetahetam-bahoaka. Ilay manampahefana no lasa olana ho azy amin’izany? Atahorana tsinona ny valifaty, ny fanaovana toeran-tsy zaka…
Misy indray ny manampahefana sasany, na olom-boafidy na olom-boatendry; eny, na mpitandro filaminana aza: manjakazaka sy manampatra fahefana tsy misy toy izany, manao zinona ny vahoaka ifotony. Tahaka ny hoe izy irery no fanjakana amin’izany. Mby amin’ny fitenenana hoe: poa-maso manjaka any amin’ny tanin’ny jamba? Mbola misy izany any amin’ny toerana lavitra fanjakana foibe.
Na izany aza, tsy jamba na adala ny vahoaka. Miandry ny fotoana hihetsehany sy hitenenany? Izay no maha zava-dehibe ny fidinana ifotony: midi-droa. Eo ny fijerena sy famahana ny fahasahiranam-bahoaka, fa tsy ambanin-javatra na ambin-javatra koa ny amin’ireo manampahefana tsy mahomby amin’ny asany, mampijaly vahoaka… Mila fepetra mba hatokisana ny mpitondra, fa tsy fihetsiketsahana tokoa no atao?